GỤỌ NKE Albanian Amharic Bulgarian Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese
N’ihe a a kọrọ n’okpuru ebe a, e nwere ihe atọ Rechel mere nke mere ka ya na mama ya sewe okwu. Ì nwere ike ịchọpụta ha? N’okpuru akụkọ ahụ, dee ihe atọ ị chọpụtara, gazie n’igbe e dere “Azịza,” nke dị ná ngwụcha isiokwu a, ma lee ma ị̀ zatara ha.
N’otu abalị Wenezdee, Rechel, onye dị afọ iri na asaa, arụchaala ọrụ o kwesịrị ịrụ n’ụlọ, gazie izurutụ ike na palọ ha! Ọ gbanyere tiivi ma nọdụ n’otu oche na-amasịkarị ya ịnọ.
Ozugbo ahụ ọ sị ka ya zuru ike, mama ya apụta, ihu mama ya gbarụkwara agbarụ. Ihe Rechel nụziri bụ: “Rechel! Ị̀ nọ ebe ahụ na-ele tiivi mgbe i kwesịrị inyere nwanne gị nwaanyị aka rụọ ihe onye nkụzi ha nyere ya ka ọ rụọ n’ụlọ? Ò nwedịkwara mgbe ị na-eme ihe a gwara gị mee?”
Rechel amalite ịtamu, “Ọ bịakwala ọzọ.” Ma mama ya nụrụ ihe o kwuru.
Mama ya abịa ya nso, sị ya, “Bịa, ị̀ sị gịnị?”
Rechel arọọ mama ya anya, maa ọsụ sị, “O nweghị.”
Ugbu a ezigbo iwe abịala mama ya. Ya asị ya, “Esikwala otú ahụ agwa m okwu!”
Rechel asị ya: “Otú ahụ gịnwa si gwa m okwu ọ̀ dị mma?”
Esemokwu ebirila ọkụ . . . Rechel ezughịzikwa ike ọ chọrọ izu.
ỤDỊ ihe a a kọrọ ò metụla gị? Gị na ndị mụrụ gị ùnu na-esekarị okwu? Ọ bụrụ na unu na-esekarị okwu, chebara ihe ndị na-akpata ya echiche. Olee ihe ndị na-esekarịrị unu okwu? N’aka nri ebe a, kanye ihe n’ihe ndị ị ma na-esekarịrị unu okwu ma ọ bụkwanụ dee ihe ọzọ na-esere unu okwu n’ebe ahụ e dere “Ihe ọzọ.”
◯ Àgwà m
◯ Ọrụ ụlọ
◯ Ejiji m
◯ Oge m ji alọta n’abalị
◯ Ihe ndị m ji atụrụ ndụ
◯ Ndị enyi m
◯ Onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe m
◯ Ihe ọzọ ․․․․․
Iseokwu anaghị adị ma gị ma ndị mụrụ gị mma n’ahụ́, ihe ọ sọkwara ya ya bụrụ ya kpatara ya. N’eziokwu, i nwere ike ijide ọnụ gị ma mee ka à ga-asị na i kwetara ihe niile ndị mụrụ gị kwuru. Ma, Chineke ọ̀ chọrọ ka ị na-eme otú ahụ? Mba. Nke bụ́ eziokwu bụ na Baịbụl kwuru ka ị “sọpụrụ nna gị na nne gị.” (Ndị Efesọs 6:2, 3) Ma o kwukwara na i kwesịrị ịzụ “ikike iche echiche” gị, jirikwa ya na-arụ ọrụ. (Ilu 1:1-4; Ndị Rom 12:1) Ọ bụrụ na ị na-eji ikike iche echiche gị arụ ọrụ, o doro anya na a ga-enwe ihe ndị ị ga-ekwenyesi ike na ha dị mma, ma o nwere ike ndị mụrụ gị agaghị ekwe na ụfọdụ n’ime ha dị mma. Ma, n’ezinụlọ ndị na-eme ihe Baịbụl kwuru, ndị nne na nna na ụmụ ha ndị na-eto eto na-ekwurịta ihe ọ bụla ha chọrọ ikwu n’udo, ọ sọkwa ya ya bụrụ na ha enweghị otu olu n’ihe ahụ.—Ndị Kọlọsi 3:13.
Olee otú i nwere ike isi kwuo uche gị, ya aghara isewere unu okwu? Ihe i nwere ike ikwu ozugbo bụ: “Ọ bụ ndị mụrụ m ka o si n’aka. N’ihi na, ọ bụ hanwa na-ekwutekarị ihe na-esere anyị okwu!” Ma chegodị: Ọ bụrụ na a gụnye ndị mụrụ gị, mmadụ ole ka i nwere ike ime ka ha kwụsị ime ihe ha na-eme? Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụ naanị onwe gị ka i nwere ike ịgbanwe. Ọ bụrụkwa na i mee ihe ndị i kwesịrị ime iji hụ na gị na ndị mụrụ gị eseghị okwu, ndị mụrụ gị agaghị na-abakarịrị gị mba, ha ga-akakwa ege gị ntị mgbe i nwere ihe ị chọrọ ikwu.
Ugbu a, ka anyị lee ihe i nwere ike ime iji hụ na gị na ndị mụrụ gị eseghị okwu. I mee ihe ndị a anyị na-aga ikwu ugbu a, otú gị na ndị mụrụ gị ga na-esizi akparịta ụka ga-adị iche nke na ọ ga-eju ma gị ma ndị mụrụ gị anya.
(Aro: Kanye ihe na nke i kwesịrị ịrụ ọrụ na ya.)
◯ Chee echiche tupu ị sawa ha okwu. Baịbụl kwuru, sị: “Onye ezi omume na-eche eche tupu o kwuo.” (Ilu 15:28, Baịbụl Nsọ Nhazi Katọlik) Ọ bụrụ na a gwa gị ihe were gị iwe, ekwupụla ihe mbụ batara gị n’obi. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na mama gị asị gị: “Gịnị mere ị saghị efere ndị ahụ? Ò nwekwara mgbe ị na-eme ihe a gwara gị mee?” Ihe mbụ nwere ike ịbata gị n’obi ikwu bụ, “Ò nwedịkwara mgbe ị na-ekwe m zuru ike?” Kama ikwu ya, jiri ikike iche echiche gị rụọ ọrụ. Gbalịa ka ị chọpụta ihe mere mama gị ji gwa gị okwu otú ahụ. Ọ bụrụ na mama gị ekwuo ihe dị ka, “ị na-emekarị ihe dị otú a” ma ọ bụ “ò nwedịkwara mgbe ị na-eme ihe a sị gị mee,” ihe mere o ji kwuo ya abụghị na ọ bụ ihe ị na-emekarị, kama, ọ na-egosi na o nwere ihe na-ewe ya iwe. Gịnị ka o nwere ike ịbụ?
O nwere ike obi adịghị mama gị mma n’ihi na ọ na-adị ya ka à hapụụrụ ya ọrụ niile dị n’ụlọ. O nwere ike, naanị ihe ọ chọrọ bụ ka i mesie ya obi ike na ị ga na-enyere ya aka. O nwekwara ike bụrụ eziokwu na ị na-agbara ọrụ ụlọ ọsọ. Ihe ọ sọkwara ya ya bụrụ, ịsị mama gị, “Ò nwedịkwara mgbe ị na-ekwe m zuru ike?” agaghị abara gị uru ọ bụla. Naanị ihe o nwere ike ịkpata bụ esemokwu. Kama ikwu ụdị ihe ahụ, í cheghị na ọ ga-aka mma ka i mee ka obi ruo ya ala? Dị ka ihe atụ, i nwere ike ịsị: “Mama, ka m gaa saa efere ndị ahụ ozugbo, achọghị m ka i wee iwe.” Ihe ị na-ekwesịghị ime: Ekwukwala okwu ka ị̀ na-akparị ya. Ikwu ihe gosiri na ị ghọtara otú obi dị ya ga-aka eme ka gị na ya ghara ise okwu.
N’okpuru ebe a, dee ihe ọ ga-abụ mama gị ma ọ bụ papa gị kwuo, ya akpasuo gị iwe ma ọ bụrụ na i kwere ka ọ kpasuo gị iwe.
Ugbu a, chee okwu ọma i nwere ike ịgwa ya nke ga-eme ka obi dajụọ ya.
◯ Sọpụrụ ha mgbe ị na-agwa ha okwu. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Mishel si n’ihe ndị mere mbụ mụta na ọ dị mkpa ịkpachara anya n’otú o si agwa mama ya okwu. Ọ sịrị: “Mgbe ọ bụla mụ na mama m nwere okwu, ọ na-agwakarị m na otú m si agwa ya okwu adịghị ya mma.” Ọ bụrụ na mama gị na-agwakarị gị ụdị ihe a, mụta iji nwayọọ agwa ya okwu, wetuo olu mgbe ị na-agwa ya okwu, hụkwa na ị naghị arọ ya anya ma ọ bụ na-ama ọsụ mgbe gị na ya na-ekwu okwu. (Ilu 30:17) Ọ bụrụ na ọ dị gị ka iwe ejuwela gị obi, kpee ekpere n’obi gị. (Nehemaya 2:4) Ihe mere ị ga-eji kpee ekpere ahụ abụghị ka Chineke mee ka ndị mụrụ gị kwụsị inye gị nsogbu kama ọ bụ ka Chineke nye gị ike ijide onwe gị ka ị ghara ime ka okwu ka njọ.—Jems 1:26.
N’okpuru ebe a, dee okwu na omume ụfọdụ ndị ị na-ekwesịghị ime.
Ihe ndị m na-ekwesịghị ikwu:
Omume ndị m na-ekwesịghị ime:
◯ Gee ntị. Baịbụl sịrị: “Onye na-ekwu okwu mgbe o kwesịrị imechi ọnụ ga-adaba ná mmehie.” (Ilu 10:19, Baịbụlụ Nsọ nke International Bible Society) N’ihi ya, hụ na i nyere mama gị ma ọ bụ papa gị ohere ikwu okwu, geekwa ya ntị nke ọma mgbe ọ na-ekwu okwu. Ya bụrụ na o nwere egwú ị na-akpọ, gbanyụọ ya, ya bụrụkwa na ị na-agụ akwụkwọ ma ọ bụ magazin, dewe ya, nọrọkwa jii gewe ya ntị. Anapụla ha okwu n’ọnụ iji gọrọ ọnụ gị. Naanị ihe ị ga-eme bụ ige ha ntị. Ha kwuchaa, ị ga-enwe ohere ịjụ ha ajụjụ ma ọ bụ ịgwa ha ihe i chere. Ma ọ bụrụ na i sie ọnwụ kwuwe otú ọ dị gị n’obi ozugbo ahụ, ị ga-eme ka ihe ka njọ. Ọ bụrụgodị na e nwere ihe ị ka chọrọ ikwu, oge ahụ yiri ka ọ̀ bụ “oge ịgbachi nkịtị.”—Ekliziastis 3:7.
◯ Jikere ịrịọ mgbaghara. Ọ dị mma ịsị “ewela iwe” mgbe ọ bụla i mere ihe kpatara esemokwu. (Ndị Rom 14:19) I nwedịrị ike ịrịọ mgbaghara maka okwu unu sere. Ọ bụrụ na ị maghị otú ị ga-esi gakwuru ndị mụrụ gị rịọ ha mgbaghara, i nwere ike ide ihe ị chọrọ ikwu ede nye ha. Hụkwa na ị kwụsịrị ime ihe ọ bụla na-akpatara gị na ha esemokwu iji gosi na ị chọrọ ka ihe ka mma. (Matiu 5:41) Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ihe mere unu ji see okwu bụ n’ihi na ị naghị arụ ọrụ ụlọ, malite ịrụ ihe ahụ ka ị hụ ma obi ọ́ gaghị adị ndị mụrụ gị mma. Ọ bụrụgodị na ịrụ ọrụ ụlọ ahụ anaghị amasị gị, ọ́ gaghị aka mma ịrụ ya karịa gị na ndị mụrụ gị isewekwa okwu ọzọ n’ihi na i meghị ya?—Matiu 21:28-31.
N’ikpeazụ, ị ga-achọpụta na ịkwụsị ime ihe ọ bụla na-akpata esemokwu ma ọ bụ igbochidị gị na ha ise okwu, ga-eme ka ihe kara gị mma. Baịbụl kwudịrị na onye “obiọma na-emeso mkpụrụ obi ya mmeso ọma.” (Ilu 11:17) N’ihi ya, cheta uru ndị ị ga-erite ma ọ bụrụ na ị gbalịa mee ihe ndị i kwesịrị ime iji hụ na gị na ndị mụrụ gị eseghị okwu.
Esemokwu na-adapụta n’ezinụlọ ndị na-enwe obi ụtọ, ma ha na-ama otú ha si edozi ya. Gbalịa mee ihe ndị e kwuru n’isiokwu a, ị ga-ahụkwa na gị na ndị mụrụ gị agaghị na-esezi okwu mgbe ha na-agwa gị ihe ndị ị na-eme na-adịghị ha mma n’obi!
● Gịnị mere o ji adị ụfọdụ ndị na-eto eto ibe gị ka ọ̀ dị mma ka ha na ndị mụrụ ha na-ese okwu?
● Gịnị mere Jehova ji were onye na-esekarị okwu ka onye nzuzu? —Ilu 20:3.
[Igbe/Foto dị na peeji nke 17]
“Abịara m ghọta na n’agbanyeghị na arụwala m ọrụ ma na-akpata ego, m ka kwesịrị ige mama m ntị n’ihi na m ka bi n’ụlọ anyị. Ọ bụ ya lekọtara m kemgbe m dị obere, n’ihi ya, ya kwuo ihe ụfọdụ, dị ka ịgwa m mgbe m kwesịrị ịlọta n’ụlọ n’abalị, ọ naghị esiri m ike ịghọta ihe mere o ji nye m ụdị iwu ahụ.”
“O nwee ihe mụ na ndị mụrụ m na-enweghị otu olu na ya, anyị na-ekpe ekpere banyere ya, mee nchọnchọ n’akwụkwọ ụfọdụ, ma kwurịta ya. Anyị mechaa ihe ndị a, anyị na-ekwekọrịtazi n’otú anyị ga-esi edozi nsogbu ahụ. Mgbe ọ bụla anyị mere ka Jehova bata n’ihe ọ bụla anyị na-eme, ihe ahụ na-aga nke ọma.”
1. Ịgwa mama ya okwu mkparị (dị ka, “Ọ bịakwala ọzọ”) ga-eme ka iwe wekwuo mama ya.
2. Ịrọ mama ya anya na ịma ọsụ bụ ịchọ nsogbu.
3. Ịsa mama ya okwu (dị ka ịsị, “Otú ahụ gịnwa si gwa m okwu ọ̀ dị mma?”) ga-eme ka mama ya wekwuo iwe.
Gaghachigodị n’ihe ahụ a kọrọ ná mmalite isiokwu a. Ì nwere ike ịchọpụta ihe ụfọdụ mama Rechel mere, nke so kpata esemokwu ahụ? Olee ihe i nwere ike ime iji hụ na gị na nwa gị na-eto eto eseghị okwu? Lee ụfọdụ ihe ndị i kwesịrị iburu n’uche:
Ị gwawa nwa gị ebe o mejọrọ, ekwula ihe ndị dị ka, “Ị na-emekarị ihe dị otú a” ma ọ bụ “Ò nwedịkwara mgbe ị na-eme ihe a sị gị mee?” I kwuhaala ụdị ihe ahụ, nwa gị ga-achọ ịgọrọ ọnụ ya. O nwedịrị ike ya abụrụ na ihe ndị ahụ i kwuru abụchaghị eziokwu, nwa gị makwa na ha abụchaghị eziokwu. O nwekwara ike nwa gị ma na ọ bụ iwe mere i ji kwuo ihe ndị ahụ i kwuru, ọ bụghị n’ihi na ya emeghị ihe ya kwesịrị ime.
Kama ikwu ihe ga-akpasu nwa gị iwe, dị ka ịsị, “Ị na-emekarị ihe dị otú a,” mee ka nwa gị mara otú ihe o mere si ewute gị. Dị ka ihe atụ, kwuo ihe dị ka, “Mgbe ọ bụla i mere ihe dị otú a, ọ na-ewute m.” Nke bụ́ eziokwu bụ na nwa gị chọrọ ka obi na-adị gị mma. I mee ka nwa gị mara otú obi dị gị, ọ ga-aka emetụ ya n’obi, ọ ga na-emekwa ihe ị gwara ya.
Ọ bụ eziokwu na ijide onwe gị mgbe iwe ji gị nwere ike isiri gị ike, gbalịa na-ejide onwe gị. (Ilu 10:19) Ọ bụrụ na ihe na-esere unu bụ ọrụ ụlọ, gị na nwa gị kparịta ya. Detuo ihe ndị ị chọrọ ka nwa gị mee, ọ bụrụkwa na ọ dị mkpa, gwa ya ntaramahụhụ ị ga-enye ya ma ọ bụrụ na ọ meghị ha. Gee nwa gị ntị ma o kwuwe uche ya, ọ sọgodị ya ya bụrụ na i kwetaghị n’ihe ọ na-ekwu. Ọtụtụ ndị na-eto eto na-aka ege onye na-ege ha ntị ntị karịa onye na-anaghị achọ ka ha tinye ọnụ.
Tupu gị ekpebie na nwa gị aghọọla onye nnupụisi, cheta na ihe ụfọdụ nwa gị na-eme na-egosi na o towela. Ihe mere nwa gị ji na-asa gị okwu n’ihe ụfọdụ bụ iji gosi gị na ya aghọwala dimkpa. Gbalịa ka gị na ya ghara ịna-esekarị okwu. Cheta na nwa gị ga-amụta otú i si eme omume ma a kpasuo gị iwe. N’ihi ya, mụta inwe ndidi na ogologo ntachi obi, ị ga-ahụkwa na nwa gị ga-amụta ime otú ahụ.—Ndị Galeshia 5:22, 23.
Gị na ndị mụrụ gị ise okwu dị ka mmadụ ịnọ otu ebe na-agba ọsọ—ike ga-agwụ onye ahụ, ma e nweghị ebe ọ ga-agbaru
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị mere mụ na ndị mụrụ m ji esekarị okwu?